प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीच छलफल सकियो
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुबीच छलफल सकिएको छ । पछिल्लो समय देखिएको विवादको विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीशहरुबीच छलफल भएको हो ।प्रधानन्यायाधीशसँगको छलफलमापछि १५ जना न्यायाधीशहरु पुन: आपसमा छलफल गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबरा सत्ता भागवण्डा लगायतका विवादमा मुछिएपछि उनीमाथि राजीनामाका लागि दबाब बढ्दै गएको छ । सर्वोच्च अदालतका अधिकांश न्यायाधीशले उनलाई ‘मार्ग प्रशस्त’ गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुबीच जारी छलफ
प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन जटिलः ओली
जनकपुरधाम, मंसिर २२ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको बहिर्गमन न्यायालय सुधारको प्रस्थानबिन्दु नभई अन्त्य भएको बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेर आन्दोलन गरिरहेका नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारका पदाधिकारी ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा वा महाअभियोगले मात्रै न्यायिक सुधार नहुने बताएका हुन् । उनले प्रधानन्यायाधीश राणा हट्दैमा मात्र न्यायालय […]
Image Khabar कार्तिक २०७८
प्रधानन्यायाधीश जबराले तोके आठ इजलास
काठमाडौ, कार्तिक २६ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आजका लागि आठ इजलासमा तोकेका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले शुक्रबार एकल इजलास र सात संयुक्त इजलास तोकेका हुन् । आज सबै खाले मुद्दाको पेशी तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले आज आफ्नो आफ्नो लागि भने कुनै इजलास तोकेका छैनन् । यता नेपाल बार एशोसिएसनले शुक्रबार बन्दी […]
प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासबाट दुई मुद्दाको सुनुवाइ
आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले दुई मुद्दाको सुनुवाइ गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागिरहेका अन्य न्यायाधीश आइतबार पनि इजलासमा बसेनन्। जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार पनि आन्दोलनमा छ। सर्वोच्च...
इजलासमा बसे प्रधानन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आइतबार इजलासमा बसेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासमा चितवन जिल्ला अदालत समेतका विरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट डा. टेकबहादुर घिमिरेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश जबराको बेन्चमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । सोही इजलासमा उच्च अदालत पाटनसमेतका विरुद्ध भेषराज लोहनीले दायर गरेको रिट निवेदन पनि पेसीमा राखिएको छ ।नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई इजलासमा नबस्न आग्रह गरेको थियो
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । उनले बीचैमा राजीनामा दिए भने वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्नेछ भने राजीनामा नदिई पूरै कार्यकाल रहेमा दीपककुमार बीचैमा आउट हुनेछन् र हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने छन् । संविधानको धारा १२९ अनुसार प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । चोलेन्द्र शमशेर जबरा २०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन् । यो हिसाबले उनको कार्यकाल २०८१ पुस १७ सम्म हुन
काठमाडौं, ६ कार्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग भैरहेको बेला सत्तापक्षीय पाँच दलीय गठबन्धन भने जबराको पक्षमा उभिएको छ । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्न थालिएको छ । तर, सत्तारुढ दल भने प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्न नहुने अडान लिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाभियोग लगाउने कांग्रेसको कुनै योजना नभएको पनि कांग्रेस नेता […]
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध पूर्व पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको मोर्चाबन्दी !
काठमाडौं, २४ असोज । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु नै मोर्चाबन्दीमा लागेका छन् । विशेष सूत्रका अनुसार आज साँझ पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले एक पूर्व प्रधानन्यायाधीशको निवासमा छलफल गरेका छन् । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग भैरहेको बेला नेपाल बार एशोसिएसनका केही प्रतिनिधिहरु, बरिष्ठ अधिवक्ताहरुको सहभागितामा आज छलफल भएको बुझिएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो जेठानलाई […]